Babonakalise ngamakhono abo e-Ashdown | Eyethu News
Noon deadline looms for defiant Mugabe as Zimbabwe crisis deepens - 52 mins ago
Mugabe defies resignation expectations in TV speech – VIDEO - 54 mins ago
Bolt enlisted to improve “explosiveness” of Aussie running between the wickets - 57 mins ago
Babonakalise ngamakhono abo e-Ashdown
“Uhlelo lokufundisa intsha ngamakhono luyayisiza kakhulu.”
Esithombeni amalunga enhlangano iGolden Gate Foundation akade bebonakalisa ngamakhono abo kwaPoyinandi. Isithombe uNtombizethu Ngcobo
BASINE bashiyelana inkundla abantu abasha base-Ashdown emcimbini obusehholo lomphakathi kwaPoyinandi wokuqhakambisa amakhono abo ngoMsombuluko. Lomcimbi obuhlelwe yinhlangano engenzi inzuzo iGolden Gate Foundation inhloso yawo bekungukuthi abantu abasha babonakalise ngamakhono abanawo. Umsunguli walenhlangano uMnuz Sthembiso Gasa uthe babone kubalulekile ukuthi bahlele umcimbi ofana nalo ukuze intsha abasebenza ngayo noma abasebenza nayo ithole ithuba lokwazana kanye nokudedelana inkundla ibonakalise ngamathalente ayo.
“Abantu abasha banakhono ezinto ezahlukahlukene sabona kufanele sibahlanganise bakwazi nokwazana kanye nokuthi sazise umphakathi ngalenhlangano yethu eshintsha izimpilo zabantu iphinde yenze umehluko,”kubeka yena. Uphinde wabonga bonke asebenzisana nabo ngomfutho kanye nokuzibophezela kwabo wathi bayakhombisa ukuzimisela ekushintsheni impilo yalabantu abasha. Uqhube wathi umsebenzi uyenzeka ngenxa yabo, ufuna bathole ukugqugquzeleka ngoba abalitholi iholo.
Funda olunye udaba : Umphathiswa wezoLimo wethule umhlahlandlela
UMnuz Nkululeko Mdlalose ongumphathi walenhlangano uthe ziningi izinselelo ababhekana nazo njengoba beyinhlangano engenzi inzuzo konke abakwenzayo bakhipha emaphaketheni abo. “Loluhlelo lokufundisa intsha ngamakhono empilo luyabasiza kakhulu abantu abasha lubanika izindlela zokwenza umehluko ezimpilweni zabo. Kubakhona nemidlalo yeshashalazi kanti noqeqesho bayaluthola,” kuchaza yena.
Omunye obeyingxenye yalomcimbi uMnu Meluleki Phakathi (24)oqhamuka kwi- Thandimpilo Theatre uthe ufunde lukhulu uma kuza kwimidlalo yeshashalazi njengoba engazange akuyele esikoleni ufunde kulenhlangano. “Lomdlalo ebesiwenza obizwa nge- Let’s play ifundisa kakhulu ngegciwane lengculazi kanye nokukhulelwa. Abantu abaningi asebenalo leligciwane abafuni ukudla amaphilisi kulomdlalo uthola ukugqugquzeleka kanye nokubona ukubaluleka kokuthi uwaphuze,” kuphetha yena.
Konakele elokishini eMbali